Inhlanzi ihlala isikhathi esingakanani? Ngena uthole ukuthi izinhlanzi zihlala isikhathi esingakanani | Okwezinhlanzi
Kungenzeka wazibuza inhlanzi ihlala isikhathi esingakanani, iyini impilo yayo emaphakathi e-aquarium futhi iqiniso ukuthi, angikwazi ukukutshela inani eliqondile leminyaka ngoba izinhlanzi zingaphila kusuka emahoreni ambalwa kuye eminyakeni embalwa, kuya ngezikhathi eziningi ekumelaneni nenhlanzi, ukuthi indala kangakanani nokuthi iphakanyiswa kanjani.
Lapho benazo emathangini ezinhlanzi, hhayi ama-aquariums, ochwepheshe abaningi abathi bangagcina Iminyaka engu-2-3 ngoba izinhlanzi azibambi isikhathi eside ngenxa yengcindezi ezihlala kuyo. Abanye bathi, uma benakekelwa kahle, bangahlala iminyaka eminingi futhi bakuphelezele empilweni yakho.
Iqiniso ukuthi izinhlanzi esizithengayo imvamisa mncane ngeminyaka (cishe izinyanga ezi-2 ubudala) abazosihlala ngazo okungenani iminyaka embalwa uma sibanakekela kahle. Futhi ngokuya ngohlobo lwenhlobo, uzoyenza ihlale isikhathi eside noma ibe mfushane. Isibonelo, izinhlanzi ezisetshenziselwa ukuhlanza amafasitela, ama-cleaner, zingahlala ngaphezulu kweminyaka engu-2 uma ziphilile futhi zingacindezelekile, ngaphezu kokukhula kakhulu.
Ochwepheshe bathi inhlanzi, nge umthethosisekelo omuhle futhi unakekelwa kahle (thola ungahamba isikhathi esingakanani ungadlile), bangaphila Iminyaka eyi-10-15 kuma-aquariums (hhayi emathangini ezinhlanzi) futhi bangakwazi ngisho nokukhulisa leyo minyaka isikhathi eside, ukudlula leyo yenja. Kepha, njengoba ngikutshelile, kufanele kube yindawo enakekelwa kahle ye-aquarium lapho ingaswele lutho.
A "umthetho oqondisayo»Isitshela ukuthi uma usayizi wezinhlobo ukhula ngobuningi, isikhathi eside sokuphila kwawo, ukuze kuthi lapho sikhulu, siphile isikhathi eside, yize kufanele ucabangele i-aquarium yakho, ngeke ufune nenhlanzi inkulu kakhulu ngoba ingadla ezinye izinhlanzi.
1 Ziphila isikhathi eside kangakanani izinhlanzi eziwolintshi?
2 Ihlala isikhathi eside kangakanani inhlanzi eyi-clown?
3 Ihlala isikhathi esingakanani inhlanzi ikhayithi?
4 Ihlala isikhathi esingakanani inhlanzi yeguppy?
5 Inhlanzi ihlala isikhathi eside kangakanani ngaphandle kwamanzi?
6 Inhlanzi ihlala isikhathi esingakanani olwandle?
7 Ihlala isikhathi esingakanani inhlanzi yamanzi abandayo?
Ziphila isikhathi eside kangakanani izinhlanzi eziwolintshi?
Iningi lezinhlanzi esizithenga ezitolo ezinikezelwe ukuthengiswa kwezilwane ezifuywayo zivame ukubizwa inhlanzi ewolintshi, ukhaphethi noma igolide. Yizinhlobo ezithandwa kakhulu futhi yizo esivame ukuzibona emathangini ezinhlanzi nasemanzini. Noma kunjalo, akuzona ezaphila isikhathi eside kakhulu.
Lezi zinhlanzi zibucayi kakhulu futhi zibuthaka kakhulu kunalokho esicabanga. Kungakho kunezimo lapho sithenga khona esinye salezi zilwane ezincane futhi siphile izinyanga ezimbalwa kuphela, ngisho nezinsuku ezimbalwa. Kuyiqiniso ukuthi lo mthetho awugcwaliseki ngaso sonke isikhathi, ngoba ngokunakekelwa okufanele, singenza izinhlanzi eziwolintshi zikhuthazelele nathi kusuka I-2 eminyakeni engu-3.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi lezi zinhlanzi zikhuliswa emachibini amakhulu lapho zikhula khona futhi zikhula ngokushesha, yize zincane. Ngakho-ke, zonke lezo zinhlobo ezisezitolo zezinyoni nasezitolo zezilwane zincane kakhulu.
Ihlala isikhathi eside kangakanani inhlanzi eyi-clown?
I-Los inhlanzi ehlekisayo zingesinye sezilwane eziheha kakhulu zasemanzini. Kuyamangaza umbala wewolintshi nobomvu, kuhlanganiswe ne Imivimbo Emhlophe, kwenze kungacaci. Kuyiqiniso ukuthi kuleli qembu lezinhlanzi, kunezinhlobo ezingaphezu kwezingamashumi amathathu ezibekiwe.
Endaweni yazo yemvelo, lezi zinhlanzi zitholakala emanzini afudumele e- i-Pacific Ocean, enabantu abaningi abanezixhobo zamakhorali, ezihambisana nama-anemone, ezinikeza ukuvikeleka ezilwaneni ezidla ezinye ngesikhathi esisodwa ezinikeza imithombo ehlukahlukene yokudla. Kulezi zimo, lezi zilwane ziyaphila phakathi kweminyaka emibili neshumi nanhlanu cishe, kuya, yebo, ngohlobo lwe- i-clownfish esibhekise kuyo.
Ngokungafani nezinye izinhlobo zezinhlanzi nazo ezifuyelwe impilo yonke ekuthunjweni, izinhlanzi ezingama-clown azidingi ukunakekelwa okuyisidina kakhulu, ngakho-ke ziyindlela enhle yokuzifaka ku-aquarium yethu, lapho, uma kungenzeki okungajwayelekile futhi zinakekelwa kahle, singazijabulela kusuka I-5 eminyakeni engu-10.
Ihlala isikhathi esingakanani inhlanzi ikhayithi?
I-Los izinhlanzi zekhayithi Zingenye yezinhlanzi ezincane ezaziwa kakhulu ze-aquarium. Imibala yazo eyahlukahlukene ibenza babe yizilwane ezikhangayo, ikakhulukazi ezinganeni ezisendlini. Ngokuvuna kwabo, kufanele kuphawulwe ukuthi bayathandana kakhulu, ngakho-ke abazikhombisi izinkinga lapho behlala nezinye izinhlobo.
Zonke lezi zici zenza inhlanzi yama-kite ibe enye yezinhlanzi ezelulekwa kakhulu kubo bonke labo abaqala kulo msebenzi wokuzilibazisa. Ngaphezu kwalokho, kuyisilwane esingadingi ukunakekelwa okuningi, yize singabomndeni we i-kite fish noma i-goldfish.
Akumangalisi ukuthi lezi zinhlanzi zingaba nokuphila ekuthunjweni kusuka eminyakeni engu-5 kuya kwengu-10, inqobo nje uma zinakekelwa kahle.
Ihlala isikhathi esingakanani inhlanzi yeguppy?
I-Los izinhlanzi ze-guppy Zingezinye zezinhlobonhlobo abazithandayo nabalandeli abazithandayo. Kulezi zinhlobo, singathola abantu abahluke kakhulu komunye nomunye, ngokombala nangemilo, ngakho-ke ukuthandwa kwayo.
Yizilwane ezihlala ezindaweni ezinamanzi ahlanzekile, ikakhulukazi kulezo ezinomsinga ophansi njengemifula, amachibi namachibi. Emvelweni wemvelo, siyabathola emazweni we I-Central America njengoba Trinidad, Barbados, Venezuela nenyakatho ye Brasil.
Izici ezinamanzi ezigcina lezi zilwane kumele zibe nawo: izinga lokushisa eliphakathi kwama-22 nama-28 degrees, ama-degree angama-25 yiwona afaneleka kakhulu; i-pH kufanele ibe ne-alkaline, futhi ingalokothi ibe ngaphansi kuka-6.5 noma ngaphezulu 8. Uma sikwenza konke lokhu, lezi zinhlanzi zizokwazi ukuphila iminyaka 2.
Izici ezijwayelekile zezinhlanzi zeGuppy
Inhlanzi ihlala isikhathi eside kangakanani ngaphandle kwamanzi?
Okunye okukhathaza kakhulu abafuyi ukuthi inhlanzi ingahlala isikhathi eside kangakanani iphuma emanzini. Futhi, ngokuphambene nalokho esikucabangayo, lezi zilwane zingabekezelela isikhathi esithile ngaphandle kwemvelo yasemanzini ngokuya ngezimo ezikhona.
Uma, ngaphandle kwamanzi, inhlanzi isendaweni enegumbi lokushisa elibandayo futhi ibekwe endaweni engamunci umswakama ngokushesha, ingahlala nempilo kuze kufike cishe ehoreni elilodwa.
Kunezimo lapho izinhlanzi ziye zagxuma khona, ngendlela emangalisayo engabonakala, kusuka ethangini lezinhlanzi noma echibini. Uma lokhu kwenzeka, bese sithola izinhlanzi zethu ziphila, kufanele sizazise ngokushesha okukhulu esitsheni esinamanzi afanayo nethangi lenhlanzi noma echibini. Ngemuva kwalokho, kufanele siyihlanze kamnandi ngosizo lwenkomishi, ukuze sikhiphe noma yiziphi izinhlayiya zothuli, njll., Ezinamathele esikhunjeni sayo. Kubaluleke kakhulu ukuthi sikhumbule ukuthi akumele sihlikihle inhlanzi ngenkani ukuze sigweme ukulimala kwangaphandle. Ngemuva kokuyibuka okumbalwa Amahora we-24 Ngaphakathi kwesitsha futhi sesiqinisekisile ukuthi kulungile, sizoqhubeka nokuyibuyisela ethangini lezinhlanzi noma echibini.
Inhlanzi ihlala isikhathi esingakanani olwandle?
Ngaphakathi kohlelo lwezinto zasolwandle kunezinhlobo ezingapheli, eziningi zazo ziyadoba. Phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zezinhlanzi kunokuhlukahluka okuningi, futhi isikhathi sokuphila besingeke sibe sincane.
Imvamisa izinhlanzi ezihlala olwandle nasolwandle zihlala isikhathi eside kunabalingani bazo abaphila okufanayo emachibini nasemifuleni. Kukhona izinhlanzi eziphila ngokulambisa unyaka owodwa, kanti ezinye ziphila kuze kube yingxenye yekhulu leminyaka. Ngokuhlukile, ama-sturgeons nabaqoqi bamaqembu batholakale ngaphezulu kwe- Iminyaka engu-100. Kepha uma besizokwenza isilinganiso seminyaka yokuphila kwezinhlanzi zasolwandle, singasho ukuthi siseduze ne- iminyaka 20.
Uma sifuna ukwazi ukuthi inhlanzi ineminyaka emingaki, kunobuqili obuthembekile. Njengamasongo adonswa yiziqu zemithi, uma sibheka esikalini senhlanzi, nazo zidweba uchungechunge lwemigqa yokukhula. Ngayinye yale migqa ikhombisa unyaka owodwa wesilwane. Ukwenza lokhu, kuyadingeka ukusebenzisa ingilazi yokukhulisa ephezulu, ngoba ngeso lenyama cishe akunakwenzeka.
Ihlala isikhathi esingakanani inhlanzi yamanzi abandayo?
Izinhlanzi zamanzi abandayo zifaka phakathi lezo ezihlala emachibini, emifuleni, nakuzo zonke izinhlanzi ezifuyelwe ama-aquariums kanye namathangi ezinhlanzi. Kunezinhlobonhlobo eziningi, kepha, ngokungafani nezinhlanzi ezihlala emanzini asolwandle, zivame ukuhlala isikhathi esincane.
Uma ngaphambili sathi izinhlanzi zasolwandle zingafinyelela isikhathi sokuphila esiphakeme kakhulu, ngisho nokufinyelela iminyaka 20 nezibalo eziphakeme kakhulu, izinhlanzi zamanzi abandayo zivame ukuba nesikhathi sokuphila kusuka eminyakeni emibili kuye iminyaka ye-15.
Siyethemba ukuthi ngendatshana yethu usuvele unombono ocacile we inhlanzi ihlala isikhathi esingakanani kanye nesikhathi sokuphila salezi zinhlanzi ezincane (hhayi ezincane kakhulu) esivame ukuba nazo ekhaya.
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Inhlanzi » Inhlanzi ihlala isikhathi esingakanani?
inhlanzi encane kusho
kahle kahle ikati lami lisaphila iminyaka emi-4
Phendula izinhlanzi ezincane
Lineth :) kusho
Inhlanzi yami ineminyaka engu-5 ubudala futhi isesigodini sezinhlanzi futhi baseneziningi ezisele
Phendula ku-lyneth :)
Nginenhlanzi yebhubesi futhi manje seyiphile iminyaka emi-5
Izinhlanzi zami zife namuhla, iminyaka eyi-13 nami. Ngizizwa kabi, nginezimila ekhanda lami ezikhule kakhulu muva nje. Namuhla ekuseni, wayelele lapho evuka njalo ekuseni futhi afe ntambama.
Thu PainTer Okusha kusho
Nginenhlanzi yebhubesi futhi kuze kube manje isiphile iminyaka eyi-13 kodwa ngaphandle kokuyishiya ngaphandle kokunakwa
Phendula ku-Thu PainTer Fresh
super elisa kusho
Izinhlanzi zami zamanzi abandayo kubonakala sengathi ziyafa, ngisize!
Inhlanzi yami isivele ifile, sekuphele izinyanga ezi-4
inhlanzi yami ithule kakhulu futhi ayifuni ukudla !! Angazi ukuthi unani ... izinsuku ezimbili ngamupha okunye ukudla angazi noma kungaba yikho yini lokho. Usizo . kufana nokufa
UDiego Martinez kusho
Nganginenhlanzi eyashona ngoMashi futhi ngangenela umncintiswano ekupheleni kukaDisemba
inhlanzi yami eneminyaka engu-4 ubudala yafa kwakuyisibonakude esikhulu
Ngangine-oscar fish eyangihlala iminyaka eyi-13.
Ngingayenzela kanjani i-pH kanye nezinga lokushisa uma nginezinhlobo eziningana zama-cyclids ku-aquarium yami
i-parakeet yami ineminyaka engu-15 ubudala
Ngine-Acanthurus Achilles futhi ibise-aquarium yami iminyaka engu-4 ngenyanga ...
inezinhlanzi eziningi, eyake yaphila kakhulu kwakuwukukhuphuka: iminyaka eyishumi nane !!!!!!! Wadlula emhlabeni ngemuva kwezinsuku ezimbalwa inja yami yobudala efanayo yadlula emhlabeni …… .. mhlawumbe ngenxa yokudabuka lapho ngingambonanga, angazi noma ngangizobona okuningi, kepha lapho uHercules esondela i-fishbowl isikali sami sihambile njengoba ngisho, siphakamisa i-haha
Sawubona! Inja yami ibineminyaka emithathu ikhona futhi ayifuni ukunyakaza kakhulu futhi isesimweni esime mpo futhi iphefumula ngokushesha okukhulu.
lic. ximena kusho
kahle hhayi konke abakushoyo kuliqiniso
Ngiyisazi sezinto zasolwandle
Phendula ku-lic. ximena
Ngibe ne-characius iminyaka eyi-9 futhi inkulu kakhulu kangangokuba umzimba awuhlali entendeni yesandla nakwezinye ezineminyaka engaphansi nobukhulu
Sawubona, nginenhlanzi eyedwa futhi esethangini lezinhlanzi ezingama-50 litre futhi isivele ineminyaka eyi-15 futhi angazi noma ngabe iqiniso neqiniso lokuthi abampofu abanakho ukunakekelwa okukhulu
Nganginenhlanzi ewolintshi, uhlobo olwalubiza ama-peseta ayi-100 emuva ngaleso sikhathi, futhi ethangini lezinhlanzi ezingilazi, okujwayelekile, ngiphila iminyaka eyi-17. Vele, ukushintsha amanzi njalo ezinsukwini ezimbili-ezintathu futhi njalo uhlanza amatshe ezansi kahle.
Okwezinhlanzi ezincane, bekungumdlalo omncane lapho efa.
Bangishiyela izinhlanzi ezimbili ngicela, futhi ngemuva kwezinsuku ezintathu bashonile sebephile iminyaka emine futhi ngiyazinakekela kahle kodwa angazi kwenzekeni.
ULuis Eduardo Manotas kusho
Inhlanzi i-Aequidens diadema (mojarrita) iyisilwane esidla izibungu zamakhambi (omiyane) abadlulisa uDengue, iChikungunya neZica; ivumelana namanzi amachibi ezindlu ukuze isetshenziselwe ukusetshenziswa kwasekhaya futhi iqinisekisa ukuqedwa kwemithombo yomiyane.
ULuis Eduardo Manotas S. MD.
Izinhlanzi zami seziyi-100, angazi noma yinhlanzi noma ufudu xD!
Inhlanzi yami ibineminyaka eyi-11 futhi ithangi lingama-35 cm ngo-16 cm, futhi kulungile, ngivele ngalahlekelwa iso!
gcina ama-capellades kusho
sinenhlanzi eneminyaka engama-20 ubudala
Phendula ku-fina mila capellades
Nginezinhlanzi ekhaya ethangini lezinhlanzi futhi zingihlale iminyaka engu-15 eminye iminyaka eyi-16 (izinhlanzi zamanzi ezindala nezindala ezibizwa nangokuthi ezokuhlanza ezansi)
Ngiyawashintsha amanzi ezinhlanzi zami njalo ezinyangeni ezi-3 noma ngaphezulu futhi isethangini lezinhlanzi elingasenakulingana. Kusenze saba bakhulu! Ngiyethemba ukuthi izothatha iminyaka engama-20.
Qaphela: kungenye yalezo zinto ezibandayo zamanzi abandayo
Nginenhlanzi ayidalile eyi-molly futhi isaphila yaze yahamba, wayeneminyaka emithathu futhi wababulala manje lokhu yedwa futhi useneminyaka engaba ngu-3 nami, ethangini lezinhlanzi elilula futhi ngaphandle kokunakekelwa okuningi. Kungezwe ukuyisebenzisela ukuhlolwa kwe-biology. Akafi hahaha.
Ngiyathanda… Nginezinhlanzi zami ezilingana ne-phalanx. Namuhla banesandla esivaliwe. Iminyaka emihlanu yamanzi abandayo emathangini ezinhlanzi. Ngokusobala ngiwashintshe aba makhulu. Kepha ngithanda ukuthi uphile isikhathi eside ...
Banginike cishe izinhlanzi ezincane eziyi-17 zamanzi abandayo futhi kulezi zinsuku eziyi-15 ezedlule bebefa. Angazi ukuthi kwenzekeni ngabo. Babenezinyanga ezi-4 nathi kanye nezinyanga eziyi-6 nanoma ngubani onginike bona.
Ngicela usize kusho
Inja yami uDorozi yadla inhlanzi yami kodwa ngicabanga ukuthi iyaphila ngoba ngiyayizwa iphefumula
Phendula Usizo ngicela
Ngine-telescopic eneminyaka emibili futhi ngizoyinakekela ukuze ihlale eminye iminyaka emi-2.
Yebo, uma zingahlala isikhathi eside, thina endlini besinezinhlanzi ezintathu e-aquarium kusukela ngo-2008, eyodwa yafa eminyakeni emi-2 eyedlule, bese kuthi ezinye izinyanga eziyisishiyagalombili ezedlule futhi kusekhona eyodwa esiyigcinayo.
Nginofishi wamanzi abandayo ashibhile, uneminyaka engu-9 ubudala, usindile ekuqaleni kwe-hypothermia, ukuntuleka komoya-mpilo nginokulunywa enye inhlanzi futhi sengathi bekunganele ngezikhathi ezithile ngidla isinkwa, ngakho-ke ngicabanga ukuthi izongiphelezela isikhathi eside, i-chiqui iyindawo yonke
Inhlanzi yami ingenye yamawolintshi futhi ineminyaka engama-20 ubudala, ihlala iyodwa futhi isethangini lezinhlanzi, manje ingamalitha angama-20
Nginezinhlanzi ezimbili izinhlanzi zami zineminyaka engaphezu kwengu-2 ubudala
USIZO NGICELA NGINGU-FAN NUMBER WAKHO OYEDWA kusho
IZINSUKU ZAMI EZINGU-PESTIE 3, NGENZANI UKUZE NGIDLULE IZINSUKU EZINGU-6 ESIKHATHINI SEZI-5 ??
Phendula USIZO NGICELA NGINGU-FAN NUMBER WAKHO OYEDWA
pollardo fernandez kusho
Nginenhlanzi iqhude engingazi ukuthi izophila isikhathi esingakanani kodwa ngeke iyeke ukunyakaza
Phendula ku-pollardo fernandez
Nginetende eliwolintshi. Nginayo esitsheni esifanayo abanginike sona futhi iqiniso ukuthi ingibambe kakhulu. Inhlanzi ineminyaka engu-5 ubudala. Le nhlanzi imaka isigaba esithile empilweni yami, ngiyithenge ngesikhathi uHiba esemnyakeni wokuqala we-ESO futhi manje njengoba sengisesigabeni sokuqeqeshwa ngiyabona ukuthi kuyini. Uma olunye lwalezinsuku ehamba, ingxenye yami iya naye. Kufana nomfowenu omncane, noma ngabe bancane kangakanani, ubathanda njengezihlobo zakho.
Kungani ungashongo ukuthi uhlala kangakanani noma uhlala isikhathi esingakanani?
Phendula ukuze ufake inkanyezi
Inhlanzi yami ebizwa nge-lebiasin noma i-puddle fish yaphila iminyaka efika kwengu-12 futhi yafa njengendoda endala, yayicishe yagobhoza futhi yayiyimpumputhe esweni elilodwa, ngaphandle kombala wayo ocishe ube luhlaza okwesiliva osuphenduke waba mnyama futhi waba mncane esiswini sayo ... nganginentshisekelo yokuzingela izinhlanzi ezincane njengama-guppies engangihlala ngimnika wona ukuze adle ...
ULuis Antago Herrera Betancourt kusho
Ngithanda izinhlanzi zihle kunezinhlobo eziningi zokubonga ngolwazi
Phendula ku-luis antago herrera betancourt
Adriana mazzantini kusho
Inhlanzi yami ethangini ihlale iphila iminyaka engaphezu kwengu-15, inhlanzi yegolide enginayo manje indala kakhulu futhi isaphila, kufanele ibe neminyaka engu-16 noma eyi-17 ubudala futhi isekhona….
Phendula u-Adriana Mazzantini